Amabhishi amahle kakhulu e-Ibiza | Izindaba Zokuhamba
Amabhishi amahle kakhulu e-Ibiza
UMariela Carril | 28/09/2021 17:00 | Ibiza, Amabhishi
Ibiza KuseMedithera futhi kuyingxenye yeziQhingi zeBalearic, inamakhilomitha angama-210 ogwini lolwandle kanye namanye amabhishi athandwa kakhulu futhi amahle eSpain. Uyabazi? Ngabe awusiboni isikhathi sokuthi kube ihlobo 2022 ukuyokuzijabulisa?
Namuhla, e-Actualidad Viajes siyazi amabhishi amahle kakhulu e-Ibiza ngakho-ke lungiselela isikhombi ... nepotimende!
2 Amabhishi amahle kakhulu e-Ibiza
Kanye neMenorca, iMallorca neFormentera iyingxenye yeziQhingi zeBalearic. Ama-cove namabhishi alo ayiphupho, kepha kunjalo nangomhlaba wonke wezokuvakasha noweholide owakhiwe eminyakeni edlule. Namuhla, i-Ibiza Kufana nephathi.
I-Ibiza ingamakhilomitha angama-79 ukusuka ogwini lwezwekazi, ine- isimo sezulu esifudumele futhi ibhekane nokufuduka okukhulu ngekhulu le-XNUMX. Abantu bayo abaningi, behlaselwa ubumpofu, bawela izilwandle baya e-Algeria naseCuba. Ikhulu lama-XNUMX laliqale kahle, eminyakeni edlule '60 no-'70, nini ezokuvakasha zaqala ukukhula futhi yakhiqiza ukuthuthuka kwayo.
Namuhla uthi Ibiza bese usho impilo yasebusuku, iphathi, amadisco, amabhishi nabantu abasha.
Babalwa nxazonke Amabhishi angama-80 ogwini lwase-Ibiza futhi kukhona konke okuncane, kusuka emabhishi athule futhi akhululekile futhi kude kakhulu kuya emabhishi ajwayelekile, amachweba amatshe amatshe, amabhishi enhlabathi enoshukela namabhishi amahle kakhulu.
Ngasempumalanga kune- ibhishi elidumile kakhulu futhi elijwayelekile ngoba inamanzi apholile alungele izingane kakhulu, ngaphezu kwezitolo nezindawo zokudlela ezizungezile. Ngikhuluma ngani UCala Llonga, nesihlabathi salo segolide nokuma kwe-arc. Lapha ungashiswa yilanga, ufunde ukucwilisa, ukudlala i-volleyball yasolwandle nokunye okuningi.
Ibhishi eliseduzane nedolobha lase-Ibiza uqobo ITalamanca, enesihlabathi esisagolide negolide boardwalk. Imvamisa kuvakashelwa izivakashi nabantu bendawo, kunezindawo zokudlela ezinamanani anosawoti ngandlela thile futhi kunjalo kuminyene kakhulu ngabantu abasha ngemuva kweklabhu. Ungacabanga ukuthi ngoba kusondele enhlokodolobha kukhona kakhulu abantu kodwa akunjalo, ikakhulukazi ekuseni noma ntambama.
Eningizimu yi ILa Salinas, ibhishi lomkhosi kakhulu e-Ibiza (noma basho kanjalo). Ngabe ama-nightclubKukhona njalo abantu abasha, ungahlala udansa esihlabathini, udle isidlo sasemini, idina noma uphumule. Ukuzola ngokwengeziwe nokujabulela imvelo, kuyindawo ye- ILas Salinas National Park Futhi, kulula ukuya embhoshongweni wokubuka oseningizimu impela yesiqhingi ngoba kunama-coves amancane lapho.
ICala d'Hort kuvela izihlabathi zegolide futhi inokubukwa okuhle ngesiqhingi sase-Es Vedra, emkhathizwe, amamitha angamakhulu ambalwa ukusuka ogwini. Kukhona izikebhe, ama-yachts, futhi ngenkathi ephezulu kukhona abantu abapholile kakhulu ukujabulela izindawo zokudlela, ukufika nokuhamba ngezikebhe eziboshelwe olwandle.
La UPlaya d'en Bossa lubanzi kakhulu, empeleni ibhishi elide kunazo zonke e-Ibiza futhi uye iklabhu elidume kunawo wonke, phakathi kokunye okugcwele. Ubusuku buqala kuma-disco kepha kuvame ukuqhubeka olwandle.
Entshonalanga yesiqhingi ngu ICala Conta, enye yezinto ezinhle kakhulu kwabaningi. Inesihlabathi esithambile esimhlophe namanzi acwebile, yinhle kodwa kuhlala kukhona abantu. Ungaya ntambama uhlale lapho ucabanga ngokushona kwelanga okuhle noma okusagolide noma isnorkel emachibini emvelo asogwini, phakathi kwamatshe ...
UCala Saladeta elinye iparele ku OGwini olusentshonalanga, futhi ukuze ufike lapho kufanele uwele amatshe athile. Kuyitheku elincane elinesihlabathi segolide namanzi acwebe ngekristalu. Abantu oyobabona bavame ukuba bancane futhi baletha ukudla neziphuzo zabo ukuchitha usuku njengo ayikho imigoqo yasolwandle emehlweni. Vele, kubonakala sengathi iziphuzo ziyathengiswa. Futhi ogwini olusentshonalanga yi UCala Tarida, ibhishi elihanjelwa yimindeni kanye nezivakashi nabantu bendawo nemibhangqwana.
ECala Tarida kunamadisco, izindawo zokudlela, amanzi azolile futhi acacile, zonke izithako ukuze ngenkathi yehlobo kube ngokoqobo ulwandle oluqhumayo. Uma uthanda okuthile okuthulile, kufanele uye enyakatho lapho kunama-cove amancane.
Futhi amabhishi asenyakatho? Nakhu U-Aguas Blancas, ulwandle olunesihlabathi esimhlophe oluzungezwe amawa amangalisayo. Kuyinto a ibhishi lomdabu futhi abantu bendawo bathambekele ekugxileni eningizimu kakhulu yogu. Lapho kunomoya, kwakhiwa amagagasi amancane, anama-white crests, yingakho igama. Yindawo enhle ukubona ukuphuma kwelanga.
Futhi ogwini olusenyakatho yi Ibhishi laseBenirras, ezungezwe ngu amawa nophayini, phakathi kwesihlabathi, amatshe amancane namatshe. Amanzi, acace bha futhi alungele ukuthwebula i-snorkeling. Ngulwandle lwase Umunwe kaNkulunkulu futhi ukushona kwelanga kuyinto evela komunye umhlaba. Bathi usuku oluhamba phambili lokuya kuleli bhishi yiSonto lapho kuhlelwa khona imakethe yendawo. Ngenkathi ephakeme ibhasi lifika futhi akukwazi ukufika ngemoto kwazise umzila uvalwe kuthrafikhi.
La UCala Jondal Kuyisigaxa semvelo esizungezwe imvelo enhle, sinezihlahla zikaphayini nezindlu ezinhle. nayi i- Iklabhu yasebusuku iBlue Marlin, lapho kuya khona osaziwayo abaningi. Kuyinto ebhishi itshe futhi imfashini enhle uma kukhulunywa ngokudla, ukuphuza, ukuzijabulisa futhi ubonwe. Elinye i-cove elidumile ledisco yalo ngu ICala Bassa, enesihlabathi esimhlophe futhi icishe ipostal. Nayi iCala Bassa Beach Club, ukudla, ukuphuza nokudansa.
Ungafika kalula eCala Bassa ngemizuzu engu-15 ukusuka eSan Antonio usebenzisa ibhasi 7. ICala Xuclá ingelinye lamabhishi amancane futhi alungiswa kakhulu kulesi siqhingi. Ayikho imigoqo, akukho zindlu zangasese, futhi akukho misebenzi enikezwayo. Ngulwandle loluthulile, loluthulile, oluzungezwe yizihlahla zikaphayini, kunezinye izikebhe zokudoba kanye no isimo se-rustic kakhulu.
Sa Caleta Kuyinto ebhishi sizungezwe amawa abomvuZisikhumbuza iGrand Canyon yaseColorado, e-United States. Leli bhishi liyimizuzu eyi-15 kuphela ukusuka edolobheni lase-Ibiza. Inamanzi azolile futhi ngenxa yalesi sizathu ijwayelekile, futhi kukhona indawo yokudlela ethandwayo enikezela izinhlanzi ezihlwabusayo nezinhlanzi zasolwandle. Ibhishi liyathandwa kodwa amawa alo alinika umuzwa wobumfihlo.
Vele, lezi akuzona zodwa Amabhishi e-IbizaKunabanye abaningi kakhulu, ngakho-ke uma ufuna ukubazi futhi uphile isipiliyoni se-Ibiza ... ungaphuthelwa u-20222!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Ibiza » Amabhishi amahle kakhulu e-Ibiza
Amathempeli aseMegalithic aseMalta